थाहा खबर: डाक्टरको विहेमा दुई विद्यालयलाई सहयोग
डाक्टरको विहेमा दुई विद्यालयलाई सहयोग
गुल्मी : गुल्मीका एक परिवारले छोरीको बिहेमा उठेको रकम विद्यायललाई सहयोग गरेका छन्। जिल्लाको छत्रकोट गाउँपालिका ४ निवासी भुपाल ज्ञवालीले छोरीको विहेमा दुई विद्यालयहरुलाई ५०/५० हजार रकम दिएका हुन्।
उनीहरुले गुल्मीको रुरु गाउँपालिका ६ रिमुवास्थित जनज्योति माध्यमिक विद्यालय र पाल्पास्थित दम्कडा माध्यमिक विद्यालय दम्कडालाई उक्त रकम सहयोग गरेका हुन्।
ज्ञवालीले हालै आफ्नी छोरी डा.पुर्णिमा ज्ञवालीको विहे पोखरा महानगरपालिका १७ अन्तर्गत छोरेपाटन निवासी हिराराज चालिसे र पार्वती चालिसेका छोरा डा. जयप्रकाश चालिसेसँग विहे गरिदिएका हुन्। अनावश्यक खर्च गरेर रकमको दुरुपयोग गर्नु भन्दा बरु उक्त रकमलाई सामाजिक क्षेत्रमा खर्चिनुपर्छ भन्ने लागेर आफूहरुले उक्त निर्णय गरेको ज्ञवालीले बताए।
दुवै विद्यालयहरुमा केही दृष्टिविहिनहरुले अध्यन गर्दछन्। 'उनीहरुलाई देखेर सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने सोंचाई पहिलेदेखिनै जागेको थियो तर मौका मिलेको थिएन' ज्ञवालीले भने ‘यही मौकामा सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मनमा लाग्यो र घर सल्लाह गरेर हामी उक्त निर्णयमा पुगेका हौं।' समाजमा विहेमा दाईजो दिनैपर्छ भन्ने मान्यता अझै कायमै छ।
काठमाडौं : त्रिभुवन विमानस्थबाट नयाँ शैली प्रयोग गरेर सुन भित्रिने गरेको कुरा सार्वजनिक भएको छ। शुक्राबार राती ११ बजे ...
१४ वर्षकी बालिकाको पेटमा आफ्नै बाबुको गर्भ!
सोलुखुम्बु : जिल्ला प्रहरी कार्यालय सोलुखुम्बुले विभिन्न अपराधमा संलग्न अभियुक्तहरूलाई आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको छ। जिल्ला...
सेनाका अधिकृतलाई कटवालका 'टिप्स' : सिपाहीको आँशु होइन आशिर्वाद खानू
काठमाडौं : पूर्व प्रधानसेनापति रुकमाङ्गत कटवालले नेपाली सेनाका अधिकृतहरूलाई अगाडि कस्तो काम गर्ने भन्नेबारे टिप्स दिएका छन्। उनले आफू ज...